Ukhenketho | Ucanzibe 2022
Umqeqeshi omncinci ubonisa indlela yokwenza isitayile esikhulu kwindawo encinci (kuhlahlo-lwabiwo mali oluncinci)
Umqeqeshi we-Minimalism kunye ne-stylist encinci yendlu kaMelanie Gnau bubungqina bokuba ubuncinci akufuneki buthethe ukuba buyadika.
Ngaphambi nasemva: Indlu eXineneyo ngoku iKhanya, iyaKhanya, kwaye iyonwabisa kakhulu
Umyili wezangaphakathi u-Eileen Preston uphucule eli khaya laseKapa le-Cod, walinika ubuso obukhanyayo.
Yonke imibala yepeyinti kule ndlu intle yasekhaya yaseMexico yiNtandokazi yethu eNtsha
Ukusuka kwi-aksenti yentsimbi etyheli, ukuya kumbala ohlaza okwesibhakabhaka ongaphandle, ukuya kwiikhabhathi ezipinki zangasese, kwigumbi lokulala eliluhlaza, nangaphezulu, eli khaya lanamhlanje laseMexico likhonza ngombala, isitayile esiphefumlelweyo sango-1970.
Isitayile seDrama seKerry seNew Orleans
INew Orleans yaziwa ngenkcubeko yayo ebiza iindleko. Apha kwisiXeko saseCrescent, sinexesha lonke lonyaka-abantu abalungiselela kulo unyaka wonke-abazinikele ekuzenzeleni. Kodwa isinxibo esimangalisayo asikhethi kuphela ixesha leCarnival. Ngaphandle kweMardi Gras, iNew Orleans ibonelela ngamathuba amaninzi okolula umda wesitayile. Umntu omnye ogama ikhabethe lakhe liquka i-joie de vivre yesixeko nguKerry Maloney. Sikhe sayokundwendwela igumbi lakhe laseFrance lekota kunyaka ophelileyo.
I-Excel kwindawo yokuhlala eyongezelelweyo: Amagumbi aPhila ngokuBekwa kwePouf egqibeleleyo
Iipoufs, imiqamelo yomgangatho, ii-ottomans ezisezantsi kunye nezihlalo ezincinci-zonke ezi zizinto ezintle zokuhombisa kwigumbi lokuhlala nanini na xa ufuna ukuhlala ngakumbi okanye ukuthamba okungaphezulu. Kodwa ayisoloko ikristale icacile kanye apho ipouf yakho esandula ukuthengwa okanye i-DIYed pouf okanye umqamelo womgangatho kufuneka uhambe khona. Endaweni yezitulo ezisecaleni? Njengetafile yekofu? Uhlobo lokudada uye ecaleni?
Igumbi laBafana abaBomvu, baMhlophe kunye neBlue
Igama: UCayden noKyle (iinyanga ezi-6 ne-11) Indawo: Providence, Rhode Island Saqala eli gumbi kwiminyaka eyadlulayo kulo mxholo - kukho into malunga neklasikhi ebomvu, emhlophe neblue ethi nje amakhwenkwe amancinci kum, ndiyayithanda! Nangona yindawo encinci, iphethe inqindi enkulu ngokudibanisa iipateni ezimnandi zokwahlula eli gumbi kulo lonke ikhaya lethu elingathathi hlangothi. Ngokubanzi, bendinethemba lokwenene lokudala indawo eyonwabisayo necocekileyo yam ukuba babelane ngayo amakhwenkwe am amabini.
I-Retro yango-1970 uVan wayeyilelwe kwikhaya leRad ngamavili
Inkuthazo yeli khaya linamavili yayizii-70s ze-boogie vans, kodwa ngendlela esebenza ngokukuko ukuze uphile kamnandi.
Thatha amaNqaku: Eli khaya lesimbo seTudor sowe-1930 linegumbi lokuhlala elipholileyo
Indlu yayidinga umsebenzi omninzi xa uBrooke kunye nosapho bakhe bangena, kodwa wayethandana nalo lonke uphawu lwembali!
Igumbi likaJane elipinki kunye neGumbi eliMnyama
Igama: JaneAge: 8 (liwele likaCharlie) Indawo: Los Angeles, CARoom Ubungakanani: 15 'x 15' Xa uJane wangena kwigumbi lomntakwabo (abantakwabo ngoku bahlala kwigumbi elinye), wayefuna ukuba nezwi ngokuhombisa igumbi lakhe lokulala elitsha . Umyili wezangaphakathi, uKristin Panitch, wamnceda ukuba aqonde indawo yakhe yokuphupha. Udonga lwebhodi eshiyekileyo xa yayiligumbi lomntakwabo. Njengamantombazana amaninzi, wayefuna iindonga ezikhanyayo ezipinki kwaye yonke imisebenzi egumbini lakhe yeyakhe.
Umyili uVictoria Cho uchithe lonke ixesha lakhe lasimahla ngaphandle komsebenzi kuyilo lwendlu kunye nobume bendawo. 'Kwakukho ubusuku obungenasiphelo bokuphanda, ukuphonononga amabhidi, kunye nokufaka iiodolo zokugqiba, izixhobo zekhompyutha, njl.'
Igumbi lokuqasha iSan Francisco leSikwere-chi-500 liLungile, kodwa iPatio ayicacanga
Lo myili wezinto zangaphakathi uthengise indlu yakhe encinci yesitudiyo ukuba ibe nkulu kancinci (kodwa intle nje) kwigumbi elinye lokulala elinye eSan Francisco.
Indlu yaseMoody yaseVirginia ephefumlelwe nguEdgar Allen Poe liphupha lomthandi weGothic
Kukho imibala eseludongeni emnyama ngokungaqhelekanga, isofa evelvet eluhlaza kunye nezitulo ezifanayo, itafile yekofu ye-onyx, kunye negumbi lokuhlala elikhulu eliseludongeni.
I-Bungalow yase-Spain eneminyaka eli-100 ubudala inamathambo amahle kunye neeArches eziMangalisayo
Kukho iisilingi zemigqomo yoqobo, udaka olwenziwe ngesandla kunye nefestile enkulu ye-arch, iityesi zeencwadi, i-arch doorways kunye nendawo yomlilo.
Jonga Ngaphakathi kwiKhaya elinye lohlobo olwenziwe kwiiBrain Bins
Kuthathe iminyaka emibini enesiqingatha kwaye kwaxabisa i-80,000 yeedola ukwakha eli khaya kusetyenziswa imigqomo yeenkozo kunye nezinto eziphinda zenziwe kwakhona.
I-25 yezona ndlu zintle zintle, ii-RVs, iiPhenyane, kunye nezinye iiNgcaciso zaseKhaya ezivela kubahlali bokwenyani.
Siye sajonga iLOTI yamanye 'amakhaya' e-2020, kwaye nganye kuzo iyakhuthaza, ifanelekile, kwaye ipakishwe ngeendawo ezincinci zokwandisa izimvo.
I-1930 yeeNdlu zeCape Cod-Style zifumana i-Makeover enhle, Zonke ngelixa zigcina iCharm yayo yoqobo
Ngaphandle kweendonga ze-beige, igumbi lokuhlambela elipinki, kunye nekhitshi elityheli, uJenna kunye nomyeni wakhe babona ukubakho kweli khaya le-1930s.
I-Emerald Green Nursing Nursery yaseBranson
Igama: Indawo yaseBranson: ePortland, eOregon Ubungakanani bamagumbi: i-130 iinyawo zesikwere Xa umama kaBranson, uJill, eqala ukucinga malunga nokuba loluphi uhlobo lwezityalo zokulungiselela ukwenzela umntwana wakhe, wakhawuleza wazi ukuba ufuna ukusebenzisa umbala wePantone ka-2013 Unyaka, u-emerald oluhlaza, kumntwana wakhe we-2013. Wayonwabile ekwakheni igumbi lokuzonwabisa eligcwele i-adventure-kwaye ke, umxholo wokuhamba ngolwandle wazalwa.
Abantu aba-5 kunye neenja ezi-3 babelana ngeNdlu yeBarn eyi-800-Square-Foot Barn
Olu khenketho lukhangeleka kusapho lwamalungu amahlanu ama-Inuit-Métis aseNunatukavut abelana ngendlu entle ngokumangalisayo kwidolophu encinci eMantla Canada.
Ngama-1930 iAustin Bungalow yiMagical Rainbow ngaphakathi nangaphandle
Yindawo ebhiyozela ubugcisa kwaye ibonelela ngendawo ekhuselekileyo yokubandakanya unyango.
Enye yezona Zindlu zoBuntu, eziSiko (kunye neStylish) izindlu ezincinci
Uzibize 'Nks. Umphefumlo weGypsy 'uJewel Pearson wamkela ngebhongo iindwendwe endlwini yakhe encinci azenzele yona.
Intsingiselo yokubona i-555
Kutheni ndiqhubeka ndibona i-111
Inombolo yeengelosi 1212 ezinentsingiselo
Intsingiselo ye-333 ngothando
Ithetha ukuthini i-1234